Zvemukati Kushambadzira kweReal Estate | Martech Zone
Zvemukati Kushambadzira kweReal Estate
Muvhuro, October 14, 2013 Muvhuro, October 14, 2013 Adam Mudiki
Patakavaka Agent Sauce kusanganisa masosi, IDX kubatanidzwa, marwendo, nharembozha, kushanya kwevhidhiyo, email kushambadzira, mameseji eSMS uye kudhinda, isu taiziva kuti kushambadzira zvemukati kwaive kiyi yekufambisa zvakanyanya kutengesa kune vamiririri. Uye, hazvishamise, vamiririri vedu vanoshandisa chikuva vanoona zvizere mhinduro huru uye nemitengo yepedyo.
Kugadzirwa kwehutano haingori buzzword kana imwe isina kuvharwa, yekuyedza nzira yekutengesa: inoshanda chaizvo. Muchokwadi, kushambadzira kwemukati kwakaratidzirwa kuburitsa kanokwana katatu zvakapetwa akawanda semadhora sekubhadharwa kwakabhadharwa. Seye real estate nyanzvi, zvisinei, kugadzira zvemukati zvinowirirana nevateereri vako zvinogona kunetsa. Mushure mezvose, vatengi vezvivakwa iboka rakasiyana, rinotora mazera akasiyana siyana.
Nzvimbo yakagadzira iyi infographic iyo inotaura nezve yakakura sei yekushambadzira yezviri mukati mekambani yeReal Estate. Mahotera anovaka Anopindura Real Estate Mawebhusaiti achibatanidza akanaka magadzirirwo, kuitisa, uye IDX / MLS kusangana.
Tags: kusangana kwedxinfographicplacetermushareal estate zvemukati zvemusikakushambadzira kwezvivakwareal estate saiti
Powtoon: Gadzira Mifananidzo yeVhidhiyo uye Mharidzo
Gumiguru 15, 2013 pa 4:57 AM
Great post! Inodzidzisa chaizvo.. Ndakanyatsoverenga! Ndatenda nekugovana!